Xeer Illaaliyaha Sacuudiga Oo Turkiga U Tagay Kiiska Dilkii Suxufi Khashoggi – somalilandtoday.com
Xeer Illaaliyaha Sacuudiga Oo Turkiga U Tagay Kiiska Dilkii Suxufi Khashoggi
(SLT-Ankara)-Xeer illaaliyaha guud ee Boqortooyada Sacuudiga Saud al-Mojeb ayaa xalay gaadhay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Xafiiska xeer illaalinta Turkiga ayaa lagu wadaa inay ku wareejiyaan Saud al-Mojeb dhamaan cadeynmaha ay ka heleen baaritaanada ay ka sameeyeen qunsuliyada Sacuudiga ku leeyahay Istanbul oo ah halkii lagu dilay suxufi Jamal Khashoggi 2dii bishan Oktoober.
Dowlada Turkiga ayaa sheegtay inaysan wadashaqeyn wanaagsan ka helin Sacuudiga baaritaanka socda.
Kooxda baaritaanka ka waday magaalada Istanbul ayaa ku eedeeyey Sacuudiga inay hor istaageen in la baaro sadex qol oo kamid ah xarunta Qunsuliyada oo ah goobta dilka ka dhacay oo weli xiran, waxaa sidoo kale kooxda baaritaanka Turkida loo diiday inay baaraan ceel-biyo oo ku dhex yaal guriga uu deganaa Qunsulka, ceelkaasi oo dherarkiisa yahay 20 mitir.
Xogta laga helayo Turkiga ayaa sheegaya in maanta oo Isniin ah Xeer illaaliyaha Sacuudiga Saud al-Mojeb lagu wareejin doono warbixinta hordhaca ah ee baaritaanka Booliiska Turkiga oo la sheegay inay ka kooban tahay 150-bog.
Turkiga ayaa codsanaya in loo soo gacan geliyo dhamaan 18 qof ee lagu eedeeyey dilka suxufi Khashoggi, kuwaasi oo ay Sacuudiga sheegeen inay hada xiran yihiin. Madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa ku baaqay in raggaasi lagu maxkamadeeyo dalka Turkiga oo ah goobta uu dilka ka dhacay.
Balse Dowlada Sacuudiga ayaa weli ku adkeysanaysa inay iyadu maxkamadeyn doonto kooxdaasi dilka fulisay.